Ny ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2019 3:52 GMT
Mibilaogy any Iràka
Namokatra bilaogy momba ny sakafo tamin'ny zava-niainany ilay Japoney mpaka sary fanao an-gazety, Hiroshi Okamoto, izay nandeha namita asa tany Iraka tamin'ny taona 2004 ary nandany iray volana tany Samawa. Na dia nilaza aza i Okamoto fa manantena ny hampiditra nahandro Irakiana ho an'ireo mpamaky azy, dia manome topi-maso tsy fahita firy momba ny fiainana ao amin'ny toerana Tafi-piarovan-tena Japoney ao Iraka ihany koa izy.
Tokotokony ho miaramila japoney arivo no napetraka any Iràka, ary tamin'ny andro faha-20 nijanonany tany Iràka, dia nasaina hisakafo antoandro i Okamoto mba hihinana sakafo Japoney – sakafo mbola tsy nohaniny hatramin'ny nahatongavany tany Iràka ary tena manembona mafy izany izy – miaraka amin'ny sasany:
We all said a toast over our cansof non-alcohol Budweiser beer. The troops are given only one can to drink a day – our press team had long since finished the liquor we had brought with us to Iraq. Nonetheless, in the 40+ degree heat of midday the body craves beer, and near-beer or not, I was extremely happy with my can of non-alcohol beer…
Tonga ny sakafo, ary toa misy zavatra somary hafahafa kely. Napetraka teo amin'ny latabatra ny vilia taratasy misy vary fotsy masaka, labiera tsy misy alikaola amin'ny boaty ary fonosana plastika kely misy sakafo vonona masahana. Hafahafa. Tsy nisy sombina tempura nendasina. Nankaiza no sushi? Ary ahoana ny momba ny paty “sarrasin” (soba) izay tokony ho eo amin'ny sakafo?
Toa hita fa mbola tsy tafapetrka ny efitra fihinanana (ho an'ny fototra SDF), noho izany, tamin'ny andro iray hafa, dia voatery nihinan-kanina tao amin'ny trano lay fivavahana vonjimaika ireo miaramila Japoney nipetraka tao Samawa, ary tsy afaka nihinana sakafo Japoney tena izy izahay
Samy nanao “toast” tamin'ny boaty labiera Budweiser tsy misy alikaola izahay. Boaty iray isan'andro ihany no omena hosotron'ny tafika – efa ela ny ekipanay mpanao gazety no nahalany ny zava-pisotro nentinay niaraka taminay tany Iràka. Na dia izany aza, amin'ny hafanana 40 degre amin'ny atoandro, mangetaheta labiera ny vatana, ary na akaikin'ny labiera na tsia, dia tena faly aho tamin'ny boaty labierako tsy misy alikaola…
Nanokatra ny fonosana plastika misy sakafo izahay mba hahita sakafo hariva “mackeral” natono. Mazava ho azy, raha vao vita ny sakafo dia tsy misy fanampiana faharoa intsony.
Tsy tena mpitati-baovao i Okamoto; fa mpaka sary ara-panatanjahan-tena, ka nisy tonian-dahatsoratra iray nanonona ny fitambaran'ny “talenta sy traikefan'i” Okamoto ary nandresy lahatra azy mba handeha any Iràka. Miaraka amin'ny fomba fanoratra sady ara-panahy sy tony, mazava tsara fa manana fitiavana marina amin'ireo rehetra nihaona taminy tany Iraka i Okamoto.
Mianatra teny Swahili any Tanzania
Mba misy Japoney iray aloha farafahakeliny no mibilaogy momba an'i Tanzania. Ninablog manoratra ny fiainan'i Lulu, mpianatra manana diplaoma izay miala sasatra satria mandany herintaona any Tanzania mianatra teny Swahili. Tsy tena anarany ny hoe “Lulu”, izay midika hoe “perla” amin'ny teny swahili, saingy mihevitra izy fa mora kokoa ho an'ireo tsy mpiteny Japoney ny mahatadidy sy manonona ny anaram-bosotra.
Shanghai Kuma (ao amin'ny fitaovana fibilaogina So-Net an'i Sony) mibilaogy momba ny efa-taona nipetrahany tany Shina. Mahatonga ny bilaoginy ho mahasarika vakiana kokoa ny fomba fanoratra mahafinaritra ataon'i Shanghai Kuma, miaraka amin'ny fampiasany ny emoticone Japoney mampihomehy.
Na dia mijanona ao Japana aza ny vadiny, toa mankafy ny fiainany any Shina i Shanghai Kuma, saingy misy zavatra sasantsasany momba ny fireneny izay toa mahamanina azy. Nandritra ny fitsidihana vao haingana tany Japana, nanamarika izy fa afaka misotro kafe misy ronono be dia be, zavatra izay tsy mba amidy any Shina. “Nisotro boaty iray litatra aho omaly”, hoy izy nibilaogy. Raha vao manomboka misotro izy, dia tsy afaka mijanona.
Avy ao Korea
Na dia tsy tena ampahany amin'ny Onja Anti-Koreana aza, miresaka momba ny “habetsaky ny zavatra tsy mampino” mety hitan'ny olona mandritra ny fiainana andavanandro any Korea ny bilaogy malaza Now's the time…to deflate Korea. Natao ho an “ireo izay tia an'i Korea, ireo izay tsy tia an'i Korea … ary ireo manaraka ny onja Koreana”, mamaritra ny fiainan'i “Christopher,” izay mampianatra teny Japoney any Séoul ny bilaogy.
Amin'ny lafiny maro, mitovy amin'ny nataon'ireo mpampianatra Anglisy vahiny any Japana ny fandinihan'i Christopher. Na dia izany aza, mifanohy sy mandaitra i Christopher, ary mitady ho tsy ampy vitriol (asidra solifara mahery) izay hita matetika ao amin'ny bilaogy Japoney maro be momba an'i Korea ny lahatsorany. Na dia izany aza, mazoto mikaroka sy mandrisika izay heveriny fa toetra nasionaly Koreana i Christopher. Tamin'ny lahatsoratra vao haingana, niresaka izay heverin'ny Japoney ho faharazan'ny Koreana maka tahaka sy milalao vokatra sy hevitra Japoney izy. Na ratsy kokoa aza, nilaza i Christopher fa, ireo vokatra “nangalarina” ireo dia lazaina fa Koreana “orizinaly”.
Tranga iray, araka ny filazan'i Christopher, ny lalao an-tserasera iray novokarina tany Korea antsoina hoe “Crazy Racing Cart Rider” izay mazava tsara fa hala tahaka tamin'ny Super Mario Cart an'ny Nintendo. Fanandramana zavatra ho avy ao amin'ny fiarahamonina mihamitombo, angamba.
Bilaogy amin'ny maha-fitaovana tian'ny mpanjifa indrindra
The Mainichi Daily News mitatitra fa “lisitra voalohany amin'ny zavatra ankafizin'ny mpanjifa any Japana ny bilaogy”.
Nangataka tamin'ny olona 1000, manomboka ny 15 taona hatramin'ny 69 taona tao Japana i Dentsu mba hifidy ny zavatra tiany indrindra amin'ny alalan'ny fitanisana ireo vokatra 150.
Tranonkala, na tranonkala manokana, no anisan'ny lisitr'ireo zavatra 10 malaza indrindra nofidin'ireo mpanjifa tany Japana nandritra ny tapany voalohan'ny taona 2005, hoy ny goavan'ny dokambarotra, Dentsu Inc.
Vaovao farany momba ny fifidianana any Japana:
Misy fiantraikany amin'ny fibilaogina ao amin'izany firenena izany ny lalànan'ny fifidianana Japoney ‘efa lany andro ela’:
Nijanona nanavao ny bilaoginy malaza amin'ny aterineto i (Takafumi Horie, izay kandidà amin'ny fifidianana 11 septambra) – bilaogy izay nahitana fisoratana anarana mihoatra ny 50.000 isan'andro – nanomboka ny 18 aogositra, andro talohan'ny nanambarany ny firotsahany hofidiana.
Nijanona namoaka fampahalalam-baovao ao amin'ny vavahadin-tseraserany izay milaza momba ireo kandidà manokana amin'ny fifidianana ny Livedoor, orinasany momba ny tolotra aterineto, hoy i Kazuyoshi Omura, mpitondra teny. Mikasa hikarakara fifidianana manokana ny tranonkala raha vao vita ny fifidianana.